Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » OAY! BMW 8 Series Gran Coupe Fanontana Manokana
Ny BMW Luxury 8 Series Gran Coupe lafo vidy dia hamidy amin'ny fanontana voafetra taorian'ny fanombohan'ny premiere manerantany ao amin'ny Frieze Los Angeles ny volana febroary 2022. Tamin'ny 2010, ny artista amerikana dia efa namorona BMW M3 GT2 Art Car izay nanao fampisehoana tao amin'ny 24 Hours of Le Hazakazaka Mans.
Jeff Koons, miaraka amin'i Oliver Zipse, filohan'ny filankevi-pitantanana, BMW AG, dia nanambara androany fa hamorona fanontana manokana an'ny M850i ​​xDrive Gran Coupe i mpanakanto.
Ny lafo 8 Series Gran Coupe dia hamidy amin'ny fanontana voafetra taorian'ny fanombohan'ny premiere manerantany tany Frieze Los Angeles tamin'ny volana febla 2022. Tamin'ny 2010, ny mpanakanto amerikana dia efa namorona BMW M3 GT2 Art Car izay nanao fampisehoana tao amin'ny 24 Ora an'i Le Mans hazakazaka.
Jeff Koons: “Tena faly sy haja tokoa aho amin'ny fahafahako miara-miasa amin'i BMW indray ary mamorona fiara fanontana manokana.”
Amin'izao fotoana izao dia novokarina miafina tao amin'ny BMW Group Plant Dingolfing, Bavaria ireo fiara. Nandritra ny hetsika manokana tao Pinakothek der Moderne andro vitsivitsy talohan'ny nisokafan'ny IAA MOBILITY 2021 dia naseho ny mason-tsivana voalohany sy ny antsipiriany akaiky.
THE 8 X JEFF KOONS dia endrika iray amin'ny fahamendrehana, ny fanatsarana ary ny asa-tànana, miaraka amin'ny loko marobe izay maharitra 285 ora mipetaka amin'ny fiara tsirairay. Ny endrika mirindra sy manaitra dia mampifangaro loko ivelany iraika ambin'ny folo manomboka amin'ny manga ka hatramin'ny volafotsy ary koa avy amin'ny mavo ka hatramin'ny mainty. Fiara roa ihany no hamokarana isan-kerinandro. Ny atitany misy loko marobe dia misy akony avo lenta, hoditra manify ary sarom-boasarimakirana misy takelaka fanontana sy sonia vita sokitra an'ny mpanakanto. Ny seza dia vita amin'ny loko mena sy manga manaitra an'ny BMW M M. izay nahavita be indrindra tamin'ny famolavolana ny orinasa M. Ny endrika dia ahitana singa roa amin'ny zavakanto pop ary koa ny endrika geometrika manome voninahitra ny endrika sy endrika mahasarika an'ny 8 Series Gran Coupe.
BMW Group Corporate sy ny raharaham-panjakana